လောကနီတိတရားတော်များ | Mobile Master (ပခုက္ကူ-ကမ္မ)
ကျွန်တော်တို့အားလုံးလောကနီတိလေးတွေကိုဖတ်ဖူးကြမှာပါ..။ ကျွန်တော်တော့လောကနီတိလေးတွေ ကို ဖတ်ရတာအရမ်းဝါသနာပါသလိုကြိုက်လည်းကြိုက်ပါတယ်..။ကျွန်တော်အားတဲ့အချိန်လေးတွေမှာ Blogs
လေးတွေကိုသွားရောက်လည်ပတ်တတ်ပါတယ်..အဲဒီလို Blogs တွေထဲရောက်ရင်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးရှာ
ဖတ်တာ လောကနီတိလေးတွေပါ..ပြီးမှကျန်တဲ့ပို့စ်တွေဆက်ဖတ်တာပါ..။ လောကနီတိ လေးတွေထဲမှာ
သူငယ်ချင်းတွေလည်းဗဟုသုတဖြစ်အောင်၊ သိပြီးသားသူငယ်ချင်းတွေလည်းပိုပြီးမှတ်မိသွားအောင် ကျွန်
တော်လည်း ကိုယ့်ရဲ့ Blog လေးမှာသိမ်းထားချင်တာကြောင့်ဒီလောကနီတိလေးတွေကို ဧရာဝတီစာကြည့် မှခွင့်တောင်းပြီးကူးယူဖော်ပြလိုက်တာပါခင်ဗျာ...။
''နီတိ'' ဟူသော ဝေါဟာရသည် သင်္သကရိုက်ပါဠိ ဘာသာစကားဖြစ် ၍ ''လမ်းညွှန်''ဟု အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုနိုင်
ပေသည်။ လောကလူသားတို့ လိုက်နာအပ်သည့် လူမှုကျင့်ဝတ် နှင့် လူမှုစည်းကမ်းများဆိုင်ရာလမ်းညွှန်
ထားချက်များ ကို ပေါင်းရုံး၍ လောကနီတိ ဟုခေါ်ဝေါ်သုံးနှုန်းခြင်းဖြစ်သည်။
ပညာလိုလားသူသည် ပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်ထံအရောက်သွားပြီး ပညာကိုကြိုးစား၍ဆည်းပူး သင်ယူရာ၏။
စည်သည်တီးမှ မြည်သကဲ့သို့ ပညာရှိ သည်လည်း သူမေးလာသောအခါမှသာဖြေကြားပြောဆိုလေ့ ရှိ၏။
ပေပုရပိုက်စာရွက်၌ ရေးထားအပ်သော အတတ်ပညာကို ကိုယ့်အတတ်ပညာဟုမမှတ်ယူကောင်း။
Who put eyedrops the deer'seye to be shiny?
* မင်းသည်လည်းကောင်း၊ ရဟန်းသည်လည်းကောင်း၊ ပညာရှိ သူတော်ကောင်းတို့သည် လည်းကောင်း
ဖြောင့်မှန်စွာလျှင် တသမတ်တည်းသာ စကားဆိုကြကုန်၏။
*ဤသဘောတရားသည်ကား ရှေးရှေးသူတော်ကောင်းတို့၏ လမ်းစဉ်လမ်းဟောင်းအကျင့်ကောင်းပေ
* This is the old traditional way of noble practice followed by ancientsages.
* နေရာသစ်၌ အကျိုးဖြစ်မဖြစ် တွက်စစ်သေချာ မလေ့လာ မစူးစမ်းဘဲနေရာဟောင်းကို
* မိတ်ဆွေစစ် ခင်ပွန်းကောင်းသည် အရင်းမှာ အဖျားတိုင်အောင် ချိုသော ကြံ၏သဘောနှင့်တူ၏။
* မိတ်ဆွေ အတုအယောင်သည်ကား အရင်းပိုင်းသာချို၍ အဖျားရောက်သော် ရသာပေ့ါပျက်အချို
ရည်မထွက်သော ကြံ၏ သဘောနှင့်တူ၏။
- မျက်မှောက်ဒိဌ ကြုံတွေ့ရသော ဘေးကိုမူကား ကြောက်ရွံ့မရှိ ရဲရင့်စွာရင်ဆိုင် ဖြေရှင်း
မတော်မမှန်အကောက်ဥာဏ်သုံးတတ်သူကို တော်တည့်ဖြောင့်မှန်စွာကျင့်သုံး ခြင်းဖြင့်အောင်နိုင်ရာ၏.
မဟုတ်မှန် ဖောက်ပြန်စွာစကားဆိုတတ်သူကိုဟုတ်တိုင်းမှန်ရာ ဖြောင့်မှန်စွာ ပြောဆိုခြင်းဖြင့်အောင်နိုင်ရာ၏.
If one does not confer benefit, even though he is close relative, may be considered astranger.
လောကနီတိ - ၁၁
ထကြွလုံ့လမရှိ ပျင်းရိဖင့်နွဲ့ခြင်း - တို့ပေတည်း။
လောကနီတိ - ၁၂
လောကနီတိ - ၁၃
လောကနီတိ - ၁၄
သာမန် ရပ်သူရွာသားများ အဖို့ ညဉ့်သုံးယံစလုံး အိပ်စက်ကြစေကာမူ၊
မှူးမတ် ပညာရှိများသည်ကား ညဉ့်သုံးယံတွင် နှစ်ယံသာလျှင် အိပ်စက်ရာ၏၊
ပြည့်ရှင်မင်းသည်ကား ညဉ့်သုံးယံတွင် တစ်ယံသာလျှင် အိပ်စက်ရာ၏ ။
လောကနီတိ - ၁၅
လောကနီတိ - ၁၆
ရန်သူကိုဖြစ်စေ၊ မိတ်ဆွေကိုဖြစ်စေ အလွန်အမင်း အကျွမ်းမ၀င်ရာ။
မိတ်ဆွေပင်ဖြစ်လင့်ကစား အမျက်ထွက်သည်ရှိသော် သင့်အပြစ်မှန်သမျှကိုထုတ်ဖော်ပြတတ်၏။
- One Should not love either enemy or friend too much.
- Even thoughafriend, when one becomes angry, one may reveal all of
- မီးကိုလည်း အကြွင်းမထားရာ။
- ကြွေးမြီကိုလည်း အကြွင်းမထားရာ။
- ရောဂါကိုလည်း အကြွင်းမထားရား
- ထိုသည်တို့ကား အဖန်တလဲလဲတိုးပွားတတ်သည်ဖြစ်ရာ အကြွင်းမရှိအောင် ပြုရာ၏။
- Do not leave remnants of fire.
- Do not leave remnants of debt.
- Do not leave remnants disease.
- As those may increase times no remnants should be left.
- မျက်နှာမူကား ပဒုမ္မာကြာ။
- နှုတ်ထွက်စကားက စန္ဒကူးနံ့သာ။
- စိတ်နှလုံးကား အဆိပ်ပမာ။
- ထိုသို့သဘောရှိသူကို မပေါင်းအပ်ရာ။
- Whose face is like lotus lily.
- Whose words are as cool as sandal-wood.
- Whose heart is full of poison.
- One should not associate with suchaperson of that nature.
- ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သော ။
- ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်သော အရှင်သခင်မျိုးကို လုပ်ကျွေးမှီခိုခြင်း မပြုရာ။
- Who is severe.
- Who is niggardly.
- Who is uncharitable.
- Who is oppressive, One should not serve and rely on suchamaster.
လောကနီတိ - ၁၇
လောကနီတိ - ၁၈
ထိုသူတို့ လုပ်သမျှ ကိစ္စအ၀၀ သည် ပျက်စီးရတတ်၏။
• သူယုတ်မာကို အချစ်မလွန်ရာ။
• သူယုတ်မာသည် ထိပ်တင်ခေါင်းရွက် မြှောက်စားခံရသော်လည်း မချေမငံ ဆူဆူညံညံ ပြုတတ်၏။
• Do not love the unvirtuous too much.
• Even though praised highly, the wicked may act impolitely and boisterously.
• မြွေသည် အမျက်လွန်၏။
• မြွေထက် သူယုတ်မာသည် ပို၍ အမျက်လွန်၏။
• မြွေကို မန္တာန်ဆေးဝါးဖြင့် ငြိမ်းစေနိုင်သော်လည်း သူယုတ်မာကို ငြိမ်းစေနိုင်သည့် ဆေးမရှိချေ။
• The snake is extreme in anger.
• The wicked is more furious than the snake.
• Though the snake can be subdued by charm and drugs , there is no remedy for
subduing of the wicked.
• မိမိမိုက်လျက် မိုက်မှန်းသိသူကို ပညာရှိဟု ဆိုအပ်၏။
• မိမိမိုက်လျက် ပညာရှိဟု အထင်ရောက်သူကိုမူ သူမိုက်ဟု ဆိုအပ်၏။
• One who knows himself of his foolishness, may be said to be the wise.
• One who thinks of himself as the wise even though he is foolish may be said to be the foolish.
• သူမိုက်သည် သူပြုခဲ့သော မကောင်းမှုများ အကျိုးမပေးသေးသမျှ အကုသိုလ်ကို ပျားရည်ဟု တွေးထင် တတ်၏။
• သူပြုသောမကောင်းမှုကြောင့် ဆိုးကျိုးများ ကျရောက်ချိန်တွင်မူကား ဆင်းရဲဒုက္ခ ရောက်ရတော့၏။
• The foolish thinks his evil deeds as honey so long as there occurs no due results for his evil deeds.
• When bad results occured due to his evil deeds, then he gets into trouble.
• လူမိုက်သည် ခွန်အားရှိလျှင် သူတစ်ပါး ဥစ္စာကို အနိုင်အထက် လုယူတတ်၏။
• ပညာနည်းသော ထိုသူမိုက်သည် သေလွန်ပြီးသော် ငရဲသို့ ရောက်ရ၏။
• The fool, if he is stronger, may plunder others possessions by force.
• After death that fool of less knowledge lands in hell.
မှတ်ချက်။ ။ ။ဘာသာရေးဆိုင်ရာ Website တစ်ခုမှကူးယူဖော်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်..........။